केपी ओलीले भने- माओवादी सकियो, अब केन्द्रमात्रै बाँकी छ ! – Setosurya
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी पार्टीमा अब केही पनि बाँकी नरहेको र केन्द्रमात्रै बाँकी रहेको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका संगठन विभाग प्रमुख सहित ३० जनाले संयुक्त रुपमा राजिनामा दिए !
एमाले पार्टीभित्रका शीर्ष नेताको उम्मेद्वारीबारे एमालेले गर्यो नयाँ निर्णय !
माधब नेपालकाे अायाे कडा चेतावनी, पार्टी कार्यालय भित्रै यसरी रन्किए महासचिव विष्णु पौडेल…..